Igbo Mass Readings for December 25 2021, Uka Uzo Ututu Omumu Onye Nzoputa Anyi.
Taa, ìhè dị egwu ga-achakwasa anyị, n’ihi na a mụụrụ anyị Onyenweanyị. A ga-akpọ Ya Onye-Dị-Ebube, Chineke, Eze-Nke-Udo, Nna-Nke-Ụwa-Na-Abịanụ: Onye ọchịchị Ya na-enweghị ngwụcha.
(Ka aka ọrụ Chineke pụta ìhè n’ime anyị)
Chineke ji ike niile, ìhè ọhụrụ nke Okwu Gị e mere ahụ ezuola anyị ahụ. Biko, mee ka ìhè Gị nke a chawapụta n’ọrụ aka anyị; ka obi anyị na-amụkesị site n’okwukwe. Site na Dinwenụ anyị ….
(Maka udo si n’aka Eze nke Udo)
Chineke ji ike niile, Nna nke ìhè, a mụụrụ anyị Nwa e nyere anyị Nwa nwoke. Okwu Gị dị ebighị ebi si n’eluigwe gbadata oge anyị ji nwayọọ na-eche nche abalị. Nzukọ Gị jupụtara n’ebube ugbu a maka na Chukwu ya nọ ya nso. Biko, meghee obi anyị ka anyị nabata ndụ Ya. Mụbaa ike anyị ji ahụ ọzọ ugbu a, ka ndụ anyị jupụta n’ebube na udo. Site n’Onyenweanyị….
Dinwenụ, taa anyị na-eme emume ihe omimi nke ọmụmụ Jesu Kristi Nwa Gị. Biko, anyị na-arịọ ka onyinye a rute Gị dịka aja kwesịrị ekwesị. Otu Kristi Nwa Gị a mụrụ n’ụdị mmadụ si chawapụta n’ụdị O jiri bụrụ Chukwu, si otu ahụ jikọọrọ anyị ihe niile nọ n’ụwa ọnụ n’ime Chineke. Site na Kristi Onyenweanyị ….
UKWE ORIRI NSỌ: Zek. 9:9.
Ada Zayọn, ñụrịkwaa! Ada Jerusalem, tisie mkpu ọñụ ike! Lee! Eze gị. Onye ahụ dị nsọ, Onye nzọpụta nke ụwa, na-abịa.
Onyenweanyị anyị ji nsọpụrụ na ọñụ na-eme emume ọmụmụ nke Nwa Gị. Biko, nye anyị okwukwe zuru ezu iji ghọta ihe nzuzo dị n’ihe omimi nke a. Ma nke ka nke, nye anyị amara ịhụnanya na-enwu ka ọkụ makụọ ihe niile dị n’ihe omimi nke a. Site na Kristi Onyenweanyị.
IHE ỌGỤGỤ NKE MBỤ 62:11-12
Isi Okwu: “Onye Nzọpụta ụnụ abịala.”
Lee ihe Onyenweanyị na-ekwusa n’akụkụ ụwa niile: Gwa ada Zayọn, lee, Onye Nzọpụta ụnụ abịala; O ji ụgwọ mmeri Ya n’aka, ọkwụkwụ ụgwọ Ya dịkwa n’aka Ya. A ga-akpọkwa ụnụ “Ndị Nsọ Chineke,” “Ndị Chineke Zọpụtara.” A ga-akpọkwa ụnụ “Ihe a na-achọ,” “Obodo a na-ajụghị ajụ.”
ABỤỌMA NA AZỊZA YA: Ps. 95:1-3, 11-13, Aịz. Luk 2:11
Azịza: Taa, ìhè ọhụrụ ga-achakwasị ụwa: a mụụrụ anyị Onyenweanyị.
1.Onyenweanyị bụ Eze, ka ụwa ñụrịa ọñụ; ka akụkụ osimiri niile sorokwa ñụrịa. Ka igwe nile kwupụta ikpe nkwụmọtọ Ya. Azịza
2. Ìhè na-achapụtara ndị eziomume. Ndị obi ha kwụ ọtọ enweela añụrị. Ụnụ ndị eziomume ñụrịwanụ n’Onyenweanyị: Nyenụ aha nsọ Ya otito. Azịza
IHE ỌGỤGỤ NKE ABỤỌ 3:4-7
Ihe ọgụgụ e wetara n’akwụkwọ Ozi Pọl dị asọ degaara Taịtọs
Isi Okwu: “Ọ bụ sọsọ n’ihi ebere Ya ka O ji zọpụta anyị, ọ dịghị ihe ọ bụla ọzọ.
Ma mgbe obi ọma na ịhụnanya nke Chineke, bụ Onye Nzọpụta anyị pụtara ìhè n’ebe mmadụ nọ, ọ zọpụtara anyị. Ọ bụghị n’ihi ezi ọrụ dị iche iche anyị rụrụ, kama Ọ zọpụtara anyị n’ihi ebere Ya; site na nsacha nke ọbara Ya, nke Mmụọ Nsọ ji amụ anyị ọzọ, na nke O ji enye anyị ndụ ọhụrụ. Chineke sitere na Jesu Kristi, Onye Nzọpụta anyị, wụkwasị anyị Mmụọ Nsọ ahụ n’uju. Chineke mere nke a ka O wee site n’amara Ya gụọ anyị na ndị eziomume, ka anyị wee ketakwa ndụ ebighị ebi ahụ anyị na-ele anya ya.
ALLELUỊA Luk 2:14
Otito dịrị Chineke n’elu kacha elu. Udo dịrị ndị mmadụ ndị ihe ha na-asọ Chineke.
Isi Okwu: “Ndị nche atụrụ hụrụ Marịa, na Josef na Nwata ahụ.”
Mgbe ndị mmụọọma ahụ si n’ebe ahụ laa n’eluigwe, ndị ọzụzụ atụrụ ahụ wee gwarịta ibe ha, sị : “Ka anyị jeenụ Bethlehem ji anya anyị hụ ihe a merenụ, nke Onyenweanyị merela ka anyị mara.” Ha wee gaa ngwa ngwa hụ Marịa na Josef na Nwa ọhụrụ ahụ ka O dina n’ụlọ anụ. Mgbe ndị ọzụzụ atụrụ hụrụ Nwa ahụ, ha kọọ ihe a kọọrọ ha maka Nwatakịrị ahụ.
Akụkọ ha kọrọ tụrụ ndị niile nụrụ ya n’anya. Ma Marịa chịịrị okwu ahụ wụnye n’obi ya, na-atụgharị ha n’obi.
Ndị ọzụzụ atụrụ wee laghachi na-eto Chineke, na-aja Yam ma, n’ihi na ihe niile ha nụrụ na nke ha hụrụ dakọtara n’ihe a gwara ha.
Categories Igbo Mass Readings, Igbo Christmas Readings Tags igbo-mass-readings-december-25-2021 Post navigation